Indonesia in Focus: Si gaar ah inay hadda nolosha, laakiin ha iloobin adduunka
Si gaar ah inay hadda nolosha, laakiin ha iloobin adduunka
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (346)
(Qaybta saddex boqol iyo lix iyo afartan), Depok, West Java, Indonnesia, August 14, 2015, 20:07 pm).
Eebe ee aayadda Al-Qasas 77 sheegayaa nin, ninkaas waxaa waajib ku ah in ay mudnaanta siiyaan in ujeedada dhabta ah ee nolosha Aakhiro (Janno) waa aan dhiman, laakiin dadka waa in aan illoobin nafta (raaxo) in la siiyo by dunida Ilaah ku (ku meel gaar ah).
Laga soo bilaabo kooxda Ilaah ahaa qiimaha wax ka badan garabka kaneecada iyo ka badan tahay Didabadda badan dhallinyaro ah cilladaha baqtigooda ariga (Xadiiska / Sunna / al-xigmad)
Laakiin marka la eego nin runtii hodanka ah ee dunida, waxaa jira miraha, khudradda, bariiska, sarreenka iyo noocyo kala duwan oo dhirta iyo ugaarta oo ay ku jiraan xoolaha kosher la cuni karo, sida kalluunka, riyaha, digaagga, lo ', iyo in lagu lisay karaan, marka laga soo tago Xoolaha dabiiciga ah (ee carrada), sida saliidda cayriin, gaaska dabiiciga ah, tamar-dhuleedka, dhuxusha, dahab, dheeman, lacag, iyo sidoo kale biyaha (roobka), labada dhulka (ilood, harooyinka, webiyada, iyo biyaha badda (la arimaha debeda karaan biyo nadiif ah , si aan digeeyo dhirta iyo beeraha (kaynta), iyo sidoo kale baahida biyo ah noolaha (dadka iyo xayawaanka) ku nool.
Ilaah abuurayaa arzuqo, saaxiibkiisa iyo geeri (dhimasho / dhinta) ee buugga:
Laakiin Ilaah wuxuu u soo sheegtay ninkii Ilaah inuusan dadka u beddeli doontaa qaddar ee dadka ah (qof) haddii uu isaga qudhiisu quduuska ma rabto in aad beddesho (aan isku dayay) (Quraanka).
Sidaas darteed haddii qof doonayo inuu gaaro (helitaanka mushaar (ama macaash), markaas waa in isaga maraan dadaal (dadaal) ayaa sidoo kale la ganacsiga ah, barashada in ay tijaabo ah haddii uu doonayo in uu noqdo tijaabo ah, ayaa noqday dhakhtar, naqshada, xisaab, cilmi-(cilmi-), si aad u hesho daawooyin hababka -obatan ama qalab cudurka bogsiinaya, ama in ay awoodaan in baabuur ama diyaarad sameeyaan (in loo isticmaalo safarrada dheer sida socda Hajj / Cumrada in Mecca, Saudi Arabia, iyo kumanaan ka mid ah xirfadaha kale.
Dhibaatada oo dhan adduunka waxaa ugu dambeyntii loogu talagalay dadka ka badbaaday aadanaha in ay ku noolaadaan Aakhiro, sababtoo ah ganacsiga adduunka, in dhamaadka kaliya inaan caabudo Eebe.
Xoolo ka soo jeeda aan waajib kuma aha in ay bixiyaan sako, caawin Agoonta saboolka ah iyo kuwa saboolka ah, la dhiso xarumo masaajidda, dugsiyada iyo xarumaha kale ee lagu daro kharashka socda
Hajj / Cumrada.
Islaamku waa uu mamnuucayaa dadka uu dawarsanayay (dawarsanayay), haddii lagu qasbay in ay (hanjabay gaajo).
Xitaa Nabiga baray saaxiib si ay u raadiyaan xaabo kaynta oo lagu iibiyo suuqa si qoyska cuni kartaa. Waxa ay la micno ah in times oo casri ah, waa waxaan u leeyihiin in ay ka shaqeeyaan iyo naftaada isku dayi u tukanayay, Ilaah bixinta kaena hore u xaareysa dhulka, kalluunka raadinaya wanaagsan ee badda, beeraha (beeraha) si ay shaqaalaha ee warshadda, shaqaale ka tirsan shirkadda, iyo sidoo kale ganacsiga.
Nabiga yiri, sagaal ka mid ah 10 arzuqo Ilaah ahaa ee waaxda ganacsiga (oo ay ku jiraan beeraha / sooba), iyo hal koorso galay shaqaalaha shirkadda ee (shaqaalaha rayidka ah). Sidaas darteed haddii aan rabno in aan taajir (xoolo) ka dibna ganacsiga waa xirfad meesha, sida tusaalihii ugu Nabiga marka ganacsiga la xarafka hore ay xaaskiisa Khadijah (hodan carmal).
Eebe adkaade sheegay cutubka 77 Surah Al-Qasas
"Oo bal eegto waxa Eebe Siiyey aad (farax) Aakhiro, hana iloobin bahagianmu ah (raaxo) adduunka oo wanaag u sameeya (dadka kale) Eebe wanaagga falay, idiin, oo ha fasaadinina ah (wejiga ) Dhulka. Eebe ma jecla kuwa wax fasahaadiya. "
On aayaddani waxa Eebe Subhanahu wa Jannatul fasira afar nooc oo talo iyo tusaalayn looga golleeyahay in Qaaruun by dadkiisa ah, laakiin si talo iyo tusaaleyn waa in sidoo kale waxaa lagaga dhaqmayaa noo by sida raacsan Nabiga maxaa yeelay Quraanka waa hage ugu fiican ee Dadka, wuxuu arkay Ruuxii talo dhaqanka iyo hanuun in ay helaan doonaa barwaaqo adduunka iyo aakhiraba.
Calaamadaha aqoon waxtar leh
Aqoon waxtar leh waa la ogaan karaa iyadoo la eegaya milkiilaha farshaxanka. Waxaa ka mid ah Aayaadka ku jira:
1. Dadku ma daryeelaan in ay yihiin aqoon faa'iido xaaladda oo naftiisa iyo sidoo kale Quluubtooda meel ammaan nin neceb, ma isu tixgeliyo saafi ah, oo igamana yeelin kuwa kale oo leh aqoon ay u leeyihiin.
Imam al-Hasan al-Basri (dhintay th 110 H.) Rahimahullaah yiri, "Dadka waa dadka keliya oo faqih qofku dunida, sidaas filan nolosha, ogaan diintiisa, oo ku dadaala cibaadada." In Sheeko kale ayuu yiri: "Waxa uu ma ku Xasdi dadka ku yaal, kuwa iskibriya ka dhanka ah dadka ku jira waxaa ka hoosaysay, oo aan qaadan Ajir ka sayniska imtithaal u baray. "
2. Mulkiilaha sayniska waxtar leh, haddii uu aqoon kordho, sidaa darteed ma tawadhu dabeecad ', cabsi, dulli, iyo soo gudbinta hor imtithaal.
3. Science waa mid waxtar leh si ay ugu yeedhi milkiilaha baxay wuxuu iska dareerayay adduunka. Ugu weyni waa xaaladda, warkiisii, iyo ammaaneen. Ka dheerow ka oo ay la micno tahay in iyada, markaas waa calaamad ka mid ah aqoon waxtar leh.
4. Qofka iska leh sayniska tani waa in aan la sheegan in ay leeyihiin aqoon iyo waa hana kibrina isaga oo qof. Isagu ma yeelaan Jaahil ah in qof kasta, marka laga reebo qof si cad u xad-Sunnah tukan iyo Sunnaha. Waxa uu ahaa mid waalan isaga, maxaa yeelay Eebe Jannatul oo keliya, ma u gaarka ah, mana aha waxa loogu tala galay in uu sare u meel isaga qudhiisa ku xusan qof. 
Sheekh al-Islam Ibn Taymiyah (th d. 728 H) rahimahullaah share aqoontan oo micnaheedu noqday faa'iido waa tiirka iyo aasaaska hikmah- saddex qaybood. Waxa uu sheegay in rahimahullaah, "Science waa wax loo bogo, sida ka muuqata Kitaabka iyo Sunnaha waa sayniska oo laga dhaxlaa Nabiyada, sida hadlay Nabiga sallallaahu 'wa.
"Runtii, culimada waa wax dhaxashee Nabiyada, oo iyagu ma ay mari Diinaar dirham midna. Waxay mari kaliya ee aqoonta. Yaa qaaday, ka dibna uu ka qayb qaatay dad badan. "
Waxay leedahay saddex nooc oo Science:
1. aqoonta Ilaah, Magacyada, iyo tayadiisa iyo sidoo kale arrimaha la xiriira in ay. Tusaale ahaan waa sida Eebe soo dajiyey Surat al-Ikhlaash, Guddoomiyaha aayadda, oo sidaas.
2. Studies wararka ee xagga Ilaah ka yimid oo ku saabsan waxyaalaha ay ka dhacday iyo wax mustaqbalka dhici doona iyo in ka dhacaya. Tusaale ahaan waa Eebe soo dajiyay oo aayaadka sheekada, oo ballamo, hanjabaad, nooca jannada, nooca Jahannamo, oo sidaas.
The Science of Eebe wuxuu idin fari la xiriira 3. quluubta iyo falimaha jidhka, sida iimaanka xagga Ilaah, aqoon ku saabsan wadnaha iyo xaalad, iyo sidoo kale erayada iyo camal adimada. Markaasaa taas loo soo galay ee sayniska ee asaaska rumaysadka iyo xeerarka Islaamka iyo galay ee sayniska oo ka hadlaya hadalladiisa iyo falimihiisana waa wax iska cad, sida cilmiga ah Duruusta Muhiimka in uu ugala hadlo camal sharci ah. Oo waa qayb ka mid ah cilmiga diinta. 
Sheekh al-Islam Ibn Taymiyah (. Th d 728 H) rahimahullaah ayaa sidoo kale sheegay, "Waxa la yidhi Yahya ibn 'Ammar (422 th d H.),' Science in ay jiraan shan:
1. Science waa nolol diin, sayniska ee tawxiid
2. Science waa cuntada diini ah, taas oo ah sayniska ee waxbarasho macnaha Al-Quraanka iyo Xadiiska
3. Science waa diin ah daawo, fatwa sayniska. Haddii masiibo (masiibo) addoon u yimid, wuxuu u baahan yahay qof waa kan kara inuu isaga daaweeyo shilka oo, sida ku qoran by Ibn Mascuud radhiyallaahu 'anhu
4. Science waa diin cudurka, kuwaas oo fiqiga iyo faasiqnimo, iyo
5. Science oo waa u baabba 'diinta, sixirka iyo isaga oo kale ah.' "